UPope Francis Aids Lebanon Youth: Uthumela u- $ 200,000 weScholarship
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Imfundo » UPope Francis Aids Lebanon Youth: Uthumela u- $ 200,000 weScholarship
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Amasiko • Imfundo • Izindaba Zase-Italy • Izindaba ze-Lebanon Breaking • Izindaba • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Kwangathi 16, 2020
UPapa Francis kuhlelwe ukungenelela okungajwayelekile kwe Lebanon ethintwe "inkinga ebucayi" nobuphofu, ukucabanga ikakhulukazi ngemfundo yezizukulwane ezisencane.
Ithemba ukuthi ezweni lemisedari, “ukubumbana kobumbano kungafinyelelwa” ngethemba lokuthi ngale kokuhlukana noma izintshisekelo “bonke abalingisi bakazwelonke nabamazwe omhlaba baphishekela ngokufanelekile ukufuna okuhle kwabo bonke.”
Ngokungenelela okumangazayo ngokuthanda iLebanon, uPapa Francis uthathe isinqumo sokuthumela u- $ 200,000 kwi-Apostolic Nunciature yaseHarissa ukuxhasa izifundi ezingama-400 ezweni laseMpumalanga Ephakathi elihlaselwe yinkinga enkulu edala ukuhlupheka, ubuphofu futhi okungenzeka ukuthi yeba ithemba "Ngaphezu kwakho konke izizukulwane ezisencane, ezithola ukuthi ziyakhathaza njengamanje nekusasa lazo."
Lokhu kumenyezelwe esiteshini sabezindaba eHoly See Press Office ngosuku lomkhuleko nokuzila ukudla kwesintu okuthinteke ubhadane lwe-COVID-19 coronavirus.
Isibonelo sokuhlalisana kanye nobuzalwane
UPontiff, inothi liyaqhubeka, "ngokukhathazeka kukababa" kuqhubekile nokulandela ezinyangeni ezisanda kwedlula isimo seLebanon esithandekayo, esichazwe nguSt. John Paul II ngokuthi "Izwe Lemiyalezo" - indawo lapho uBenedict XVI amemezela khona iPost-Synodal Exhortation Ecclesia eMpumalanga Ephakathi. Bekulokhu kuyisibonelo sobudlelwano nobuzalwane i-Document for Human Brotherhood ebifuna ukusinikeza umhlaba wonke.
Umcabango kaPapa Francis, ngakho-ke, ungowamadodana “namadodakazi” abantu baseLebanoni, ngokwesimo samanje, esiba “nzima ngokwengeziwe” ukuqinisekisa “ukufinyelela kwezemfundo, ikakhulukazi emadolobheni amancane, ngaso sonke isikhathi ziqinisekiswa yizinhlangano zamasonto. ” Isibonakaliso “esibambekayo” sokusondela kukaPapa eZweni Lemisedari, esebenzisa iHhovisi likaNobhala Wombuso kanye neBandla Lamabandla AseMpumalanga, sinezela emnikelweni owenziwe yi-Emergency Fund yedolobha laseVatican ezinsukwini zamuva ukubhekana Isimo esiphuthumayo esiwumshayabhuqe se-COVID-19.